म संगै जापन जानकाे लागी सगै बस्ने साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् ! – Khabar PatrikaNp
म संगै जापन जानकाे लागी सगै बस्ने साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् !
August 26, 2020 805
बिज्ञापन:- म संगै अस्ट्रेलिया जाने संगै बस्ने जिवन साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् !म साधारणा लेखपढ भएकाे एउटा गाउकाे केटी हु । मेराे घर पूर्वकाे दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडाैमा बसाेबास गरर म काठमाणडाैमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे ।
मेराे लगभग उमेर पनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ । अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, र बा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २, ३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २२ बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजे तर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर अाए । र हाल म अहिले पनिकाठमाणडाैकाे बसुन्धारामा नहि बसि रहेकाे छु । त्यस कारणा मलाइ छिटाे भन्दा छिटाे वाहिर जानु परने भएकाे हुदा साेहिवमाेजिमकाे मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा अाज मैले राम्राेअसल केटाकाे खाेजिले गर्दा याे फेसबुक मार्फत सबैले जानकारी गराएकाे छु पक्कै पनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्ताे गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गर्नुहाेला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुख नगरीदुनु हुन अनुराेध सबैमा गर्दछु ।
मैले अाज सम्म अाइपुग्दा धेरै दुखहरू भाेगेकाे हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालकाे केटा चाहिएकाे हाे । मेराे हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म संगे सधे वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपन नभएकाे हुनु पर्नेछ । यसकारणा पनि मैले त्यस्सताे खालकाे केटा खाेजेकाे हाे। यो विभिन्न सामाजिक संजाल बाट लियको ।तस्बिर सान्केतिक प्रयोगको लागि मात्र
Prevशंका गर्ने व्यक्तिको लागि न त यस संसारमा शान्ति मिल्छ न त बाहिर नै
Nextपूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं,सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला
खुशीको खबर्: इजरायलले तीन महिना भित्रमा ५ सय नेपाली कामदार लैजाने, मासिक तलब डेढ लाख..!